Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || गन्थन :सहकार्य, सन्तुलन र सहअस्तित्व – kayakairan.com
गन्थन :सहकार्य, सन्तुलन र सहअस्तित्व
प्रिय पाठक, मैले गत गन्थनमै पनि लेखको थिएँ, ‘सादा परिकार र सादा परिवार मेरो जीवनको आधार बनेकोमा म गर्व गर्दछु ।’ गर्व यस मानेमा कि कुनैपनि खसी, बोका, बाख्रा, माछा, कुखुरादि जीवले मेरो नाममा काटिनुपरेको छैन । मेरो नाममा कुनैपनि निर्दोष, निहत्था जीवले फगत मेरो जिब्रोको स्वादका खातिर आफ्नो प्राणको आहुति दिनुपरेको छैन । घरको भान्सा होस् वा होटेलको किचन मेरो नाममा मांसाहार पाक्दैन । पाकी गए पनि मेरो भाग लाग्दैन । यसले मलाई स्वान्त सुखाय अर्थात परमानान्दानुभूतिको आभाष गराउँछ ।
अस्ति भर्खर सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्विर भाइरल भयो । तस्विरमा एकजना युवा गैंडामा सवार देखिन्छन् । सवारीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा जमेर टिकाटिप्पणी गरिएको पाइन्छ । कसैले पुरस्कार त कसैले सजाय दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । त्यसको केही दिनपछि ती युवालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले कारबाही गरेको समाचार बाहिर आयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मेरो एउटा प्रश्न छ । किन र केका आधारमा ती युवालाई कारबाही गरियो ? गैंडामाथिको सवारीमा किन प्रतिबन्ध ? जुन संस्थाले आउनुहोस् हात्ती सफारी गर्नुहोस् र हाम्रो जंगल घुमेर जानुहोस् भन्दै पर्यटकलाई निम्त्याउँछ, त्यही संस्थाले केका आधारमा गैंडामाथि चढ्न पाइदैन भन्दै कारबाही गर्छ ? जनावरहरुमाथि नै यत्रो विभेद ? हात्तीमाथि चढ्न हुने गैंडामाथि चढ्न नहुने ?
प्रिय पाठक, बहस हात्तीमाथि चढ्न पाइने भए गैंडामाथि पनि चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन, बहस गैंडामाथि चढ्न नपाइने नियम हात्तीमाथि पनि लागू हुनुपर्छ र आफ्नो सुविधाका लागि जनावरमाथिको शोषण बन्द हुनुपर्छ भन्ने हो ।
जनावर र मान्छेको साइनो आदिम साइनो हो । सभ्याताको सुरुआतदेखि नै मान्छेले जनावरसँग सहकार्य गर्दै आइराखेको छ । प्रश्न ‘त्यो सहकार्य कति न्यायिक भयो’ भन्ने हो । जनावारकै बुइ चढेर मान्छे यो मुकामसम्म आइपुगेको हो भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला । तर, भइदियो के भने मान्छेले जसको बुइ चढ्यो, उसैलाई ढाल्यो पहिले काँचै खायो पछि आगोमा सक्यो र असभ्यताको त्यो पराकाष्ठालाई उसले तेलमा फ्राई ग¥यो, नुन हाल्यो, खुर्सानी हाल्यो, समयक्रमसँगै विभिन्न मरमसला थप्दै गयो र जिब्रो पड्काउदै भन्यो, “वाह !, क्या स्वादिलो छ !’ अन्य विकल्प हुँदाहुँदै पनि हिंसालाई उसले आफ्नो भोक समनको माध्यम बनायो । तर, दुर्भाग्य, कालान्तरमा त्यहि हिंसा उसको भोक बन्यो ।
न दाँतको संरचना मांसाहारमैत्री छ, न त पाचन प्रणाली मांसाहारअनुकूल नै । न अस्ट्रेलोपिथेक्सको थियो न होमोसेपियन्सको छ । तैपनि मांसाहारले मान्छेको भातभान्सालाई विषालु बनाउन छोडेन । यी सब तथ्यहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै उसले मांसाहारलाई आफ्नो जीवनको एउटा अंग बनाउँदै आएको छ । यसले हिंसाप्रतिको उसको मोहलाई प्रदर्शन गर्छ ।
वीरगञ्जमा आयोजना गर्न लागिएको अश्वमेध यज्ञको उद्घाटन गर्न स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यहाँ पुग्ने कार्यक्रम छ । यज्ञमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली पनि सहभागी हुँदैछन् । प्रचण्ड पनि पुग्ने कुरा छ । मुलुकमा शान्ति र समृद्धि ल्याउनका लागि उक्त यज्ञ गर्न लागिएको भनिएको छ । एउटा घोडाको बलि दिएर मुलुकमा ल्याउन खोजिएको शान्ति र समृद्धि कस्तो हो ? यसको जवाफ आयोजक र सहभागीले दिनुपर्छ । बारामा प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना गरिने गढीमाई मेलाका कारणले हामी विश्वभर बदनाम छौं ।
लाखौँलाख निर्दाेष पशुपक्षीको बलि पाएर कुन देवी खुसी हुन्छिन् ? धर्मका नाममा यस्तो विकृति र हिंसा कहिलेसम्म ? मान्छेलाई हिंसाको लत यति गलत बसिसकेको छ कि उसले हिंसालाई नै धर्म ठानिरहेको छ । चाहे जुनसुकै धर्म किन न नहोस्, कुनैपनि धर्मको शिक्षा हिंसा कदापी हुन सक्दैन । कोही पनि ईश्वर रगतको प्यासी कसरी हुन सक्छ ? यो मान्छेको चरम धर्मान्धता र अतिवादिताको परिणाम हो ।
पृथ्वी सबै प्राणीको साझा घर हो । सबैको आ–आफ्नै अस्तित्व छ । सबैले सबैको अस्तित्वलाई सम्मान गरेमात्रै सन्तुलन बनिरहन्छ । जनावरहरुको पनि आफ्नै संसार छ । मान्छेको जस्तै उनीहरुको पनि प्राण छ । पद्धति छ । पर्यावरण छ । तर, उनीहरुको नितान्त निजी पर्यावरणमाथि मान्छेले पटक–पटक धावा बोलिरहेको छ । प्रकृतिलाई नै खतरामा पारेको छ । एउटा कृत्रिम रोबोटले नागरिकता पाइसकेको समय हो यो । सोफिया साउदिकी नागरिक भैसकिन् । ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ उत्कर्षमा छ । तर, आधुनिक सभ्यताले पनि पशुपक्षीसितको सहअस्तित्वलाई किन अंगिकार गर्न सकिराखेको छैन ? पछिल्लो सय वर्षमा मध्यम वर्गीय परिवारमा मासुको उपभोग दुई गुणाले बढेको पाइन्छ । मानव सभ्याताको नेचुरल इन्टिलिजेन्सको ग्राफ कहाँ पुगेको छ त्यो यही तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
मास भक्षणको सामाजिक मनोविज्ञान नेपालमा अझ भयानक छ । मासु खानु सम्पन्नता र अहमतासँग सम्बन्धित छ । अर्थात जसले धेरै मासु खान्छ, ऊ धेरै धनी । जसले कम खान्छ, ऊ गरीब । कसैै–कसैको सपना नै टन्न पैसा कमाएर टन्न मासु खाने पनि हुन्छ । मासुलाई बजारले मान्छेको आर्थिक पक्षसँग जोडिदिएको छ । जसका कारणले गरीब जसरी पनि मासु खान खोज्छ, धनी त झन् खाने नै भयो । अझ मलाई सबैभन्दा हिंस्रक ती लाग्छन्, जसले प्राण त वनस्पतीमा पनि हुन्छ भनेर तर्क गर्छन् । यो तर्कले उनीहरुमा मासुप्रतिको कति विघ्न मोह छ भन्ने देखाउँछ ।
प्रिय पाठक, बहस पशुपंक्षीको प्रयोजनको पनि होइन । बहस हो, पशुपंक्षीप्रतिको हाम्रो व्यवहार र धारणाको पशुपंक्षी हाम्रो मनोरञ्जनका साधन होइनन् । भोजनका साधन पनि होइनन् । यसो भन्दै गर्दा पशुपंक्षी र मान्छेबीचको सहकार्यको सम्भावना भने हमेसा बाँकी रहन्छ । तर, त्यो सहकार्य सम्मानित र दुवैको हितमा हुनुपर्दछ । यो पृथ्वी जति मान्छेको हो, त्यत्तिकै अन्य प्राणीको पनि हो ।
यो प्रकृति जति मान्छेको हो, त्यत्तिकै अन्य प्राणीको पनि हो । एकअर्कामा अनोन्याश्रित रहे पनि, मान्छेको आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक बदनियाको शिकार पशुपंक्षी हुँदै आइराखेका छन् । यो खेदजनक छ । आउनुहोस्, पशुपंक्षीमैत्री मानव सभ्याताको सुरुआत हाम्रो भान्साबाट गरौं ।